बुवालाई दागबत्ती दिनुअघि अनिशले सोधे : बाबालाई पोल्छ के…, किन जलाउने ? – PathivaraOnline
Home > समाचार > बुवालाई दागबत्ती दिनुअघि अनिशले सोधे : बाबालाई पोल्छ के…, किन जलाउने ?
डोटी – शिखर नगरपालिका–११, तल्लीसातका २६ वर्षीय तेजबहादुर जोराको मंगलबार निधन भयो । गाउँभरी सबैतिर रुवाबासी चलेको थियो । तर उहाँका ८ वर्षीय अवोध छोरा अनिश जोरालाई भने यो कुरा अन्जानजस्तै थियो ।
उनलाई के हुँदैछ भन्ने कुराको कुनै जानकारी पनि थिएन । घरबाट शव यात्रा सुरु भयो, बुवाको लासलाई काँध हाल्न गाउँलेले अनिशलाई सघाए । शवयात्रासँगै उनी पनि घाट पुगे । तर के भइरहेको छ भन्ने कुराको कुनै भेउ पाएका थिनन् उनले ।
उनी त्यतिबेला आत्तिन्छन् जब बुवालाई चितामा सजाएर ‘आगो लगाउ’ भन्दै उनको हातमा दागबत्ती दिइयो । त्यतिबेला सबैलाई भावुक बनाउँदै उनले मार्मिक प्रश्न गरे, ‘मेरो बाबालाई किन आगो लगाउने ?’ उनी आगोले बाबाको शरीर पोल्छ भन्दै आगो लगाउन मानिरहेका थिएनन् । परिवारका अन्य सदस्यहरुले सम्झाईबुझाई गर्दा अनिश बुवाको चितामा आगो लगाउन त तयार भए तर ‘बाबा, बाबा’ भन्दै चिच्याउन थाले । उनी बाबालाई किन आगो लगाएको भन्दै चिच्याइरहेका थिए । तर उनले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने कसैमा हिम्मत थिएन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि ठाउँमा क्यान्सर रोगको पत्ता लगाउने न त उपकरण छ न त औषधि गर्ने ठाउँ नै ।
बुवा तेजलाई रोगले च्यापेपछि केआई सिंह गाउँपालिका–७, को नवद्वीप विद्यालय निकेतनमा कक्षा २ मा अध्ययन गर्दै गरेका अनिशलाई घर लगिएको थियो ।
छोरालाई ठूलो मान्छे बनाउने सपनासहित तेजले भारतमा नौकरी गर्दै निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएका थिए । तेजको अवसानसँगै अनिशको पढाइ के होला भन्ने विषयमा स्थानीय बासिन्दाहरु चिन्ता गर्न थालेका छन् तर अनिशलाई भने यस कुराको कुनै पत्तो छैन् । अनिशसँगै चार वर्षीय रेश्माले पनि बुवाको सहारा गुमाएकी छिन् ।
रहेनन् जिल्ला न्यायाधीस पौडेल
म्युजिक भिडियोमा खेलाउँछु भनेर यस्तोसम्म गरेपछि युवती रुँदै मिडियामा (भिडियो हेर्नुस्)